Oromiyaafi Gambeellaa: Hariiroo obolummaa Itoophiyaa haaraa ijaaruuf - BBC News Afaan Oromoo
Oromiyaafi Gambeellaa: Hariiroo obolummaa Itoophiyaa haaraa ijaaruuf
Image copyright Biiroo Komunikeeshinii Oromiyaa
Mariin naannoon Oromiyaa naannolee ollaa waliin taasisaa jiru rakkoolee nageenyaa furuurra darbee waliin misoomuuf guddaa gumaacha jedhe Mootummaan Naannoo Oromiyaa.
Jilli mootummaa naannoo Oromiyaa bulchitootaafi jiraattota Naannoo Gaambeellaa waliin guyyaa har'aa mari'ataniiru.
'Rakkoo nageenyaa furuuf tokko ummanni waliin ta'uudha. Ka'umsa rakkoo nageenyaa ta'u irratti tumsuudha,'' jechuun Hogganaan Itti - aanaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Aadde Ummii Abbaa Jamaal himaniiru.
Waltajjiin hariiroo Oromoo-Somaalee cimsuurratti fuulleffate har'a eegala
''Mariin walitit dhufeenya ummatoota lamaanii cimsu Gaambellaatti taasifameera,'' kan jedhan Aadde Ummiin naannoon Oromiyaa naannoolee biyyattii gara caalu waliin waan wal daangessuuf mariin akkanaa akka barbaachisu himaniiru.
Obbo Shimalliis Abdiisaa akkuma pirezidantii Itti - aanaa Naannoo Oromiyaa ta'un mudamaniin osoo hin turiini olii gadi deemuun ummata waliin marii kan taasisan.
Hanga ammaattis, marii magaalota Oromiyaa adda addatti taasisaniin alatti naannoo Benishaangul, Amaaraa, Hararii, akkasumas Somaalee waliin taasisaniiru.
MM Abiy Ahimad yeroo aangootti dhufan waanuma walfakkaataa raawwataa turan. Kuni haala MM Abiy faana bu'u hin fakkaatu kan jenneen Aadde Uumiin akkana jechuun nuuf deebisan. ''MM keenyas pirezidantiin itti aanaas kaayyoo walfakkaataadhaaf kan deemu. ''Kayyoon isaanii ummata tajaajiluudha,'' jedhaniiru.
''Gaheen hoggansaa tokko ummata waliin mari'achuudha, yaada ummataa fudhachuudha, gaaffii ummataa dhaggeeffachuudha. Fuula durattis mariin itti fufa.''Waltajjiin marii hariiroo obbolummaa ummatoota Oromoofi Gaambeellaa har'a Magaalaa Gaambeellatti geggeeffamaa ture xumurame.
Akka odeeffannoo fuula Feesbuukii Biiroo Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa argannettis, waltajjii kanarratti gaaffilee hirmaattotarraa ka'aniif Pireezidaantonni naannolee lameenii deebii kennaniiru.
Yeroo gaaffii uummataa deebisanitti daandii Asfaaltii Gaambeellaa Dambi Doolloo walitti hidhu bara 2012 keessatti akka eegalamu karoorri qabamuu Obbo Shimallis himaniiru. Kana qofa osoo hintaane bu'uuraalee misoomaa ummatoonni naannolee lameen waliin irraa fayyadamuu danda'an ni hojjetamu jedhaniiru.
Shira ummata keenya walitti buusu hin keessummeessinu, ummanni dammaqee nageenyasaa tifkachuu qaba kan jedhan Obbo Shimallis, kana booda ilaalcha duubatti hafaa "anaaf qofa jedhu kaleessa burkutaa'e dhabamsiisuun Ilaalcha nuuf jedhuun bakka buusnee Itoophiyaa haaraa hunda keenyaaf taatu haa ijaarru," jedhaniiru.
Pirzidaantiin BMN Gaambeellaa Obbo Umood Ujuluu ammoo akka jedhanitti ummanni Oromoofi Gaambeellaa durirraa kaasanii waliin jiraataa turan yemmuu ta'u shira ofittootaafi of jaalattoonni walitti bu'iinsa ummatootaatiin daldaluuf hojjetaa turanitti dammaqee fashaleessuu danda'eera jedhan.
Kana booda Ummanni Oromoofi Gaambeellaa hariiroo obbolummaa yeroo dheeraa waliin qaban cimsuun Itoophiyaa hunda keenyaaf taatu haaraa ijaaruuf harka walqabatee tokkummaan ni socha'a jedhaniiru.
Waltajjiin hariiroo Oromoo-Somaalee har'a magaalaa Adaamaatti gaggeeffama
Naannoon Tigiraay 'Roadmap' barnoota sadarkaa toffaa hin fudhadhu jette